वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा झीनो वृद्धि - Arthakoartha.com
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा झीनो वृद्धि
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा झीनो वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को जेठ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता रू. २ खर्ब २ अर्ब २९ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको जेठसम्ममा रू. १ खर्ब ९४ अर्ब ४२ करोडको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको थियो ।
गत जेठसम्ममा आएको उक्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता ११ प्रतिशत र ऋण सहायता ८९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात क्रमशः ११.७ प्रतिशत र ८८.३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा क्रमशः ४.७ प्रतिशत र ९५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा विश्व बैंक समूह र एशियाली विकास बैंकको क्रमशः ५८.८ प्रतिशत र ३२.५ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २६.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा २२.९ प्रतिशत र बजेटरी सहायताको रूपमा ११.७ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रू. १५ अर्ब १२ करोड अनुदान र रू. ८० अर्ब २२ करोड ऋण गरी कुल रू. ९५ अर्ब ३४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
कृषि वस्तुको वैदेशिक व्यापार : १ खर्ब ७३ अर्बको भित्रिँदा ३७ अर्बको मात्र निकासी !
महासंघको ५४ औं साधारण सभा आजबाट सुरु, निर्वाचन भने १३ गते
घरजग्गाको मूल्य वार्षिक औसत २६.४५ प्रतिशतले वृद्धि, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी